Saturday June 06, 2020 - 19:49:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaallo saacado badan qaatay oo laysku noq noqday ay maanta barqadii ka dhaceen deegaan 10 Km ujira magaalada Xudur.
Ciidamo katirsan wilaayada Islaamiga Bay iyo Bakool ayaa weerar dhabagal ah udhigay maleeshiyaad katirsan maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo gacan saar laleh xabashida Itoobiya.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka oo duullaan ku ahaa deegaanka Abal oo qiyaastii 18 Km ujira magaalada Xudur ay lakulmeen weerar gaadma ah kaasi oo khasaara lixaad leh lagu gaarsiiyay.
Wariye Cali Yare oo ku sugan gobolka Bakool ayaa SomaliMeMo khadka taleefanka ugu sheegay in maleeshiyaadka Amxaarka kalkaalka ah tobaneeyo askari laga dilay islamarkaana gaadiid ay wateen laga waxyeeleeyay.
Warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in Meydadka ugu yaraan 15 askari lagasoo aruuriyay goobihii lagu dagaallamay, dagaalkii koowaad ayaa bilaawday saaka aroortii balse dagaalka ugu culus wuxuu dhacay maanta barqadii wuxuuna soo gaaray 12:00 durhurnimo.
Wararka ayaa intaas ku daraya in 15-ka askari ee dagaalka lagu dilay uu kamid ahaa sarkaal darajadiisa ciidan ay aheyd sedax xidigle kaasi oo lagusoo tababaray dalka Turkiga.
Raacii koowaad ee maleeshiyaadka maamulka Koonfur Galbeed markii lagu jebiyay dagaalka ayay ciidamada Itoobiya gurmad ahaan ugusoo direen maleeshiyaad ay saldhigooda Xudur ku tababareen wuxuuna khasaaraha ugu daran gaaray maleeshiyaadkii gurmadka ahaa.
Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xaaladdu tahay mid deggan waxaana deegaannadii lagu dagaallamay ku sugan oo si adag u difaacday ciidamada wilaayada Islaamiga Bay iyo Bakool.